သမိုင်းတစ်ဆစ် ချိုးမှာလား Dust2– REDPlayer
CS:GO player တိုင်းသွေးပူလေ့ကျင့်ခန်းကနေ ပြိုင်ပွဲတွေအထိ ဆော့ဖြစ်တဲ့ မြေပုံတစ်ခုရှိပါတယ်။ DUST2ဆိုတဲ့ မြေပုံဆိုတာ စတင်ထွက်ရှိလာကတည်းက ပါဝင်လာတဲ့ မူလမြေပုံတစ်ခုဖြစ်ပြီး တကယ်ကို CS ရဲ့ အနှစ်သာရကို အပြည့်အဝခံစားနိုင်တဲ့ ဂိမ်းတစ်ခုပါ။
ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ လိုအပ်နေသေးတဲ့ အပြင်အဆင်တစ်ချို့ကို ပြောင်းလဲလာတာတွေ့ရပါတယ်။ update ရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်တွေကိုတော့ ဒီအတိုင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။
map တစ်ခုလုံးမှာ player တွေ အနေနဲ့ စာလိုက်ဖတ်ရတဲ့ အခါတိုးတက်လာဖို့
လက်ရှိပြောင်းလဲလာတဲ့ တစ်ခြား မြေပုံတွေ နဲ့ လိုက်လျှောညီထွေဖြစ်အောင်
စတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ ပြုပြင်ထားတယ် လို့ဆိုပါတယ်။
Dust II အနေနဲ့ beta ပဲရရှိနိုင်ဦးမှဖြစ်ပြီး community ရဲ့ အဆိုကိုတောင်းခံနေတဲ့ အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Tunnel ထဲမှာ မှောင်လွန်းတဲ့ နေရာတွေအတွက် အလင်းပိုရအောင် အမိုးပုံစံ ပြင်လိုက်တာတွေ့ရပါတယ်။ ဗုံးထောင်တဲ့ နေရာနားမှာဆိုရင် ကားကို နေရာရွေ့လိုက်တာတွေ့ရပြီး အရင်ထက် နေရာကျယ်လာတဲ့အတွက် သွားရတာပိုလွတ်လပ်လာပါလိမ့်မယ်။ နံရံ အပေါက်လည်းကျယ်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ ဓါတ်တိုင်တွေကိုလည်း နေရာရွှေ့ထားတာတွေ့ရပြီး အရင်က သံပိုက်တွေမတွေ့ရတော့ပါဘူး။
အဝင်မှာ ဗုံးပစ်သွင်းတဲ့ အကျင့်ရှိကြတဲ့အတိုင်း ဒီမှာတော့ entry fragging လုပ်ရတာလည်းလွယ်လာမယ်လို့ပြောပါတယ်။ နောက်ဖေးပေါက်ကြီးမရှိတော့ဘူး။ ပြီးတော့ ရေတလျှောက်တွေလည်းမရှိတော့တဲ့ အတွက် ထောင့်နေရာတွေက ချောင်းကြည့်တဲ့ အခါ ပို အဆင်ပြေလာမယ်ထင်ပါတယ်။
ကားပျက် လည်းတစ်စီးပဲရှိပါတော့တယ်၊ သူ့ပေါ်ကနေ ခုန်ပျံကျော်လွှား အဆင်ပြေလာတဲ့ အတွက် Pro တွေအတွက် ရော player အသစ်တွေအတွက်ရော နည်းနည်း စိတ်ပူရတာလျှော့သွားမယ်ထင်ပါတယ်။ တစ်ချို့ အာရုံနောက်နိုင်တဲ့ မြက်ပင်တွေနဲ့ ကျောက်ခဲတုံးတွေကိုလည်းနေရာရွှေ့လိုက်တာတွေ့ရပါတယ်။
အလယ်လမ်းမှာဆိုရင်လည်း အမှောင်စောင့်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ လင်းလာအောင်လုပ်လိုက်တာတွေရပါတယ်။
ချုံခိုတိုက်လို့ရတဲ့ နေရာတွေကိုပြုပြင်လိုက်တာတွေ့ရပြီး ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ တစ်ခြားကိစ္စတွေပိုပြီး အာရုံစိုက်နိုင်အောင်လို့ပြောပါတယ်။
CS တွေတိုင်းမှာ Dust II ဆိုတဲ့ မြေပုံကတော့ ဘယ်တော့မှရိုးမသွားနိုင်တဲ့ မြေပုံဖြစ်ပါတယ်။ Bomb site B ကတော့ ပြုပြင်လက်စ Kasbah နေရာပုံစံအဖြစ်ပြောင်းသွားပြီး Site A ကတော့ ဈေးနဲ့ ဟိုတယ်တစ်ခုဖြစ်သွားပါပြီ။ အရင်က pizza ဆိုင်မရှိတော့ပဲ သွားဆေးခန်းတွေပါလာပါတယ်။
Player ရုပ်ထွက်တွေထဲမှာ leet Krew တွေကိုလည်း လက်ရှိ မြေပုံနဲ့လိုက်အောင်ပြောင်းလဲထားတာတွေ့ရပါတယ်။ high res ဖြစ်သွားပြီးတော့ ပိုပြီးမှတ်မိလွယ်ပါလိမ့်မယ်။ တစ်ချို့ကိုတော့ Salon De Coiffeur မှာတွေ့ဖူးပါလိမ့်မယ်။
Dust II ဆိုတဲ့ မြေပုံက CS ကမ္ဘာထဲမှာတော့ ၂ ဘက်အသင်းတွေအတွက် ဘက်အမျှဆုံး အညီဆုံး မြေပုံတစ်ခုအဖြစ် သဘောတူထားကြပါတယ်။ အခုပြုပြင်လိုက်တဲ့ update map မှာသူတို့ ရည်ရွယ်တဲ့ အတိုင်းဖြစ် မဖြစ်ကတော့ ကစားကြည့်ပြီးတဲ့ အခါ community မှာ ပါဝင်အကြံပေးလို့ရနိုင်ပါပြီ။
အရင်ကကျွန်တော်တို့ အချင်ချင်း squad တွေထဲမှာ မတော်တဆ “ff” ဖြစ်ခဲ့ရင် “sy,bro” ပြောရင် “np” ဆိုပြီးလာကြပါတယ်။ တကယ်လို့များလောလောဆယ် solo que လုပ်မိလို့ ff သွားထိမိရင် ချာတိတ်သေးသေးလေးက FU**** NOOB!! ဘာညာနဲ့ rage, smurfs, cheaters တွေသိပ်များလာတဲ့ ဒီ ဂိမ်းမှာ အခု Dust II အသစ်က အရင်လို player တွေကို စွဲဆောင်နိုင်ဦးမလားဆိုတာတော့…….
Tags cs go FPS